I-Semalt ichaza i-Bases De L'uhlolo lwe-SEO Technique Du Site
Ukuphuculwa kweeNjini zoPhando (SEO) Uvavanyo lokuvavanya ukuba i-website ye-SEO ibe nobungane kunye neengxaki kufuneka ziphuculwe. Uqinisekisa ukuba le site is good optimized pour toutes les changements ezenzeke kwi-industries. I-SEO Audit ibandakanya ukuhlalutya ubugcisa, iphepha lephepha, iphepha le-hors, i-competitives et par mot clé - mobile vetrina paga con paypal.
uJack Miller, umphathi we-réussite client Semalt , cacisa oko kuthethwa yi-SEO yophicotho-zincwadi, gqabaza i-exécuter et pourquoi il est essentiel pour le promotion du site.
Ukubaluleka kokucwaningwa kwe-SEO
Emva kokuba iGoogle ihlangane rhoqo kunye ne-algorithmes ye-classement et des exigences de content, iifensi kufuneka ziphendule ngokukhawuleza kwiinguqulelo ukuze zenzele ukukhuphisana. Ukuhlalutya ukuhlolwa kukuvumela ukuba uhanjiswe kwiindawo kunye nokuncedisa ukulandela i-rhythme du développement de l'industrie. Kuye kuncedo xa ukhona kwi-point de lancer entsha yeprojekthi.
Ukufikeleleka IiWebhsayithi kufuneka zifumane i-content et les moteurs de search kufuneka zifumaneke. Ukuba unonophelo kunye nale nkcazelo, i-moteur de recherche ayiyi ku-intanethi yokuhlalutya kwakho okuqukethwe, oko kukuphazamisa ukungahambisani ne-classement. Kodwa, i-Robots.txt i-outil ingakwazi ukulungisa ingxaki enjalo ekuboniseni zonke iiphetshana eziye zavalwa kwi-exploration. Ikwaquka kwakhona un study des codes of state HTTP. Kwi-cas de la canonization (ukuphindaphindwa kwiphepha), ukuhlalutya ubuchule kukuvumela ukuba uphinde ufunde ii-dupliquées kumaphepha ukuya kwintsusa. Wonke amaphepha kufuneka abe interconnectées ethele unassurer ukuba umntu ahlale e-isolé kwaye ukuba i-exploration ayifuni.
Inkcazo Ukuhlolwa kwe-accessibility kuqinisekisa ukuba iinjongo ze-search trouv le contenu. Unombolo yamanani e-index indexées dans le contenu augmente la note du site, oko kukuphucula i-state of the file d'attente d'un moteur.
Ukusebenza kwesiza Le vitesse iyona moto imoto iningi labasebenzisi abayisebenzisiyo ukunyanzela iphepha le-page ukuba ungene kwi-intanethi kunye ne-lentente. Cela i-affecte le nombre de visites of spectators..
Kukho ezimbini iifayile ze-audited SEO yokucoca i-Web site.
Iinkcukacha ze-SEO, njenge-agence, i-mener des enquêtes ezinzulu ngokusebenzisa i-outils kunye nezicelo. Xa zihlolisisa yonke indawo ye-site, zilungelelanisa i-rapport ezichasayo zonke iingxaki zabo, kwaye zinika iziphakamiso malunga neendlela zokuncedisa le ngxaki.
Izixhobo ezizisebenzisayo zizakhele i-SEO
Kukhona ezinye izixhobo zokugalela i-SEO. Ixesha lexesha, kufuneka ukuba ube nomonde, ukucacisa kunye ne-reflection strategy. Olu khetho lusetyenziswe kubantu abanokuzithemba abanezixhobo zobungcali.
Izixhobo zokuthutha inkqubo yokucwaninga
Ukumemeza iFrog okanye i-Xenu They verfient le nombre de pages indexes, detectent la canonisation, i-redirections internes kunye le duplication.
IIS SEO Toolkit Uhlalutya ufikelelo lwe-site kunye ne-recommendation comment and rendre plus convivial pour les moteurs.
Semalt iingcali zihlalutya iinkalo zobungakanani kunye nokuqukethwe kwe-SEO yakho ye-site, unikezela nge-rapport kunye neziphakamiso.
I-DNS I-Pingdom i-Donton ye-DNS
I-Builtwit Vérifie i-architecture ye-domain kunye ne-akhawunti yeengxaki ze-structural liés au référencement.
GTmetrix Un tool echonga izakhi ezenza ukuba ilayiti ifakwe kwiWebhusayithi. Idibanisa kwakhona i-historique de vitesse if i-use phambi.
Izixhobo zeWebhsayithi zeGoogle Ukuchonga iingxaki kwiphepha lewebhu
Xa uphendlo lwe-SEO ye-website ye-intanethi, qinisekisa ukuba zonke izicatshulwa zithathwe. I-complex complex ne-approche cohérente yokufezekiswa kokuhlalutya yizona zinto ezinobuncedo kwi-succès de-audit. Xa uhlaziya iziphumo zokuhlalutya i-multifactorielle, unokuhlakulela i-bonne strategy de referencement pour le promotion de votre site Web.